Tag: debe | Martech Zone
Imeri, Nọgidenụ, Too… that the mantra of marketing automation company Right On Interactive. Ulo oru akpaka ahia ha adighi elekwasị anya n'inweta - ha na-elekwasị anya na ndu ndi ahia na ichota ndi ahia, na-ejigide ndi ahia ha, ma na eme ka mmekorita ha na ndi ahia ha. Nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa nyocha na-adịghị agwụ agwụ maka nduzi. T2C jikọtara infographic a na-ajụ ajụjụ dị mkpa, gịnị kpatara na anyị anaghị edozi ngalaba azụmaahịa anyị otu a? Gịnị kpatara na anyị achọghị